Sandesh Prawahताली र गाली दुवै सहन तयार भएर क्राइम पेट्रोलमा जोडिएको हुँ। - Sandesh Prawah
ताली र गाली दुवै सहन तयार भएर क्राइम पेट्रोलमा जोडिएको हुँ।
‘दीपकराज गिरीले कमेडीभन्दा बाहिरको काम गरेको सुहाउला?’
उनकै फिल्म छक्का पन्जा ३ को ‘पहिलो नम्बरमा’ गीतझैं रेडियो, टिभी वा सिनेमा सबैतिर उनको काम पहिलो नम्बरमा पुग्यो। रामविलास र धनियाँ, तीतो सत्यदेखि छक्का पन्जा शृंखलासम्ममा आइपुग्दा उनी कला क्षेत्रका कमेडियनबाट ‘हिरो’ बने।
यसअघि को कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘क्राइम पेट्रोलको प्रस्ताव आउँदा आफू सक्षम छु कि छुइनँ भनेर अल्झिएँ।’
उनले कुराकानीमा भने, ‘अरूको काम कस्तो भयो भनेर खुट्याउन म माहिर हुँला। तर आफ्नै काम कस्तो भयो भन्न गाह्रो हुने रहेछ। सकेको प्रयास गरेको छु।’
दीपकको कुरा सुनेर म्यानेजिङ डाइरेक्टर लामिछानेले भनेछन्, ‘मैले त्यसरी सोचेकै थिइनँ।’
दीपकका अनुसार क्राइम पेट्रोल होस्टका लागि केही नाम भारत पठाउने सूचीमा उनले आफ्नो नाम पनि थप्न लगाए। उताबाट पनि दीपकको नाम ‘अप्रुभ’ भएर आयो।
‘टिभीमा तीतो सत्यको सेफ ल्यान्डिङ भइसकेको छ। तीतो सत्यसँग दर्शकको मीठो स्मरण जोडिएको छ। फेरि त्यही अध्याय दोहोर्‍याउँदा मजा नआउन सक्छ,’ उनले भने।
‘यो सो उत्कृष्ट भए म पनि पचाइन्छु। क्राइम पेट्रोलको कथा सशक्त भयो भने मेरो कामजस्तो भए पनि यो चल्छ। कथा कमजोर भयो तर मेरो भूमिका मात्र सशक्त भयो भने चल्दैन,’ उनले भने।
उनले भने, ‘तपाईं घरमा आराम गरिराख्नुभयो भने कसैले गाली गर्दैन। तर जब जोखिम मोलेर कुनै काम गर्नुहुन्छ गाली र ताली दुवैका लागि तयार हुनुपर्छ। म पनि त्यसरी नै तयार भएर आएको हुँ।’
त्यसैले उनी जिस्केर क्राइम पेट्रोल समूहलाई भनिरहन्छन् रे, ‘राम्रो काम गर्नुस् है साथीहरू। तपाईंहरूले बिगार्नुभयो भने मैले गाली खान्छु।’
आफ्नो छवि बदल्ने यो प्रयास असफल नै भए पनि कुनै खेद नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् भनि सेतोपाटि मा लेखिएको छ।
‘मैले जीवनमा पहिलोपटक जोखिम मोलेको हो र,’ उनले भने, ‘जुन बेला हामीले छक्का पन्जा बनाउने भन्यौं, सिनेमामा लगानी गर्न कोही तयार थिएन। कतिले तँ सिनेमा बनाउने? तँ हिरो बन्ने? समेत भनेर प्रश्न गरे।’
आफ्नो स्वभाव नै जोखिम मोल्ने खालको भएको बताउँदै उनले भने, ‘एउटा कथामा कतै नदेखिने नभेटिने छायामा पर्ने पात्रबाट म मात्र होइन। धेरै हाँस्य कलाकार भनेर खुम्च्याइएका हामी नायक भएका छौं। धेरैको जीवनस्तरसमेत उकासिएको छ।’
दीपकले भने, ‘तीस वर्षमा मैले धेरै कुरा पाएँ। केही गुमाउँला भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। क्राइम पेट्रोल मेरो लागि चुनौती मात्र नभएर नयाँ सिकाइ पनि हो।’